खिल्ली उडाउने ट्वीटको बदला लिइछाडे सन्दिपले ! पुरा पढी शेयर गर्नुहोस « Onlinetvnepal.com
खिल्ली उडाउने ट्वीटको बदला लिइछाडे सन्दिपले ! पुरा पढी शेयर गर्नुहोस
Published : 21 April, 2019 11:19 am
इण्डियन प्रिमियर लिगमा शनिबार राती भएको खेलमा दिल्ली क्यापिटल्सले किंग्स ११ पंजाबलाई ५ विकेटले हराएको छ । गएराती दिल्लीको फिरोज शाह कोटलामा भएको यो खेलमा नेपाली बलर सन्दिप लामिछानेले ३ महत्वपूर्ण विकेट लिए । सन्दिपले महत्वपूर्ण समयमा महत्वपूर्ण विकेट लिएर दिल्लीलाई जीत दिलाउन ठूलो सहयोग तगरे नै साथसाथै १८ दिनअघि पञ्जाबले खिल्ली उडाउँदै गरेको ट्वीटको बदला समेत लिएका छन् ।
यसअघि अप्रिल २ मा पंजाबको होमग्राउण्ड मोहालीमा भएको खेलमा किंग्स ११ पंजाबले दिल्ली क्यापिटल्सलाई १४ रनले पराजित गरेको थियो । यो खेलमा सन्दिप लामिछानेले साम कुर्रानलाई आउट गरेका थिए । लगत्तै दिल्लीले ट्वीटरमा सन्दिपको तारिफ गर्दै ट्वीट गर्यो । ट्वीटमा सन्दिप कुर्रानभन्दा अगाडि भएको उल्लेख थियो ।
San > Sam#KXIPvDC #ThisIsNewDelhi #DelhiCapitals @IamSandeep25 #NorthernDerby #IPL #IPL2019 pic.twitter.com/3IjOZzA7Yq
— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) April 1, 2019
यो खेलमा दिल्ली जीतको नजिकै पुगेको थियो तर साम कुर्रानले ह्याट्रिक लिँदै खेल उल्ट्याइदिए । अन्ततः जीतको नजिकै पुगिसकेको दिल्लीले १४ रले हार्न पुग्यो । त्यसपछि पंजाबले दिल्लीको खिल्ली उडाउँदै दिल्लीको ट्वीटको जवाफ दियो – तपाइँले बिर्सिनुभयो उनी (कुर्रान) बलिङ पनि गर्न सक्छन् ।
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> You forgot he bowls too. 😉 #SaddaPunjab #KXIPvDC #KXIP #VIVOIPL https://t.co/HigFDofBOr
हिजोको खेलमा पुनः कुर्रान र सन्दिप आमनेसामने भए । क्रिस गेल आउट भएपछि आएका कुर्रान सन्दिपको अगाडि टिक्नै सकेनन् । सुरुका ३ बलमा उनले रन नै बनाउन सकेनन् । चौथो बलमा उनी आउट भए । रोचक त के भने कुर्रानलाई आउट गर्ने क्रममा सन्दिपले बलिङ पनि आफैं गरे र क्याच पनि आफैं लिए । दोस्रो खेलमा पनि कुर्रानलाई ब्याटिङमा टिक्न नदिइ शून्यमै आउट गरेर उनले अन्ततः पंजाबको त्यो खिल्ली उडाउने ट्वीटको गतिलो जवाफ दिएका छन् ।
विश्वकप खेल्न नपाएपछि Sandeep र Sompal नेपाल फर्किएन….(भिडियो सहित)
सिंगापुरमा भएको टी–२० विश्वकप एशिया छनोट खेलेर नेपाली टिम साेमबार राति स्वदेश फिर्ता हुने भएको
अभद्र शब्द प्रयाेग गरेर क्रिकेटरलाई गाली गर्न पाइँदैन: पूर्व कप्तान विनाेद दास…..(भिडियो सहित)